Robitel's 'Kutiza Kamuri' Keraira ndeyeKunyengera Kurapa - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau Robitel's 'Kutiza Kamuri' Keraira ndeyeKunyengera Kurapa
Robitel's 'Kutiza Kamuri' Keraira ndeyeKunyengera Kurapa
by Timothy Rawles October 19, 2018 848 maonero
Kubata kwechinyakare kwetrailer kuvhura na Malvina Reynolds '"Mabhokisi madiki," yemuvhi pamusoro pevanhu vari kuyedza kutiza ivo vachishandisa kungwara kwavo chete.
Aya ndiwo marongero aAdamu Robitel anonyatsodanwa zita Imba yekutiza iyo inopinda mumitambo muna Ndira 2019. Robitel anga ari iye wekutarisa kubvira iye Kutora kwaDeborah Logan yakava chinzvimbo chakarova. Akatevera izvo pamwe neakabudirira zvikuru Inonyengera: Yekupedzisira Kiyi.
Kubva pakuonekwa kwefirimu rake razvino, ari kuchengeta nemusoro wepamoyo asi achiisa zvirongwa zvekumonyoroka nekutendeuka muchimiro chemapuzzle epanyama. Muchiitiko chekuti iwe wakazvarwa zuro zita racho rinoreva kune yakakura kuungana kusangana kubva karaoke.
Mutambo chaiye unotanga nekuisa boka revanhu mukamuri rine themed riine yakatarwa nguva yekuwana nzira yekubuda alarm isati yarira. Robitel akatora iro zano uye akaita kuti rive rekufungisisa uye rinotyisa.
Heino chirevo chepamutemo:
“Kamuri Yekutiza anonakidza mupfungwa nezvevasingazivikanwi vatanhatu vanozviwana vamene vari mumamiriro ezvinhu avasingagoni kudzora uye vanofanira kushandisa njere dzavo kuti vawane zvavangaita kana kufa. ”
Imba yekutiza ichavhura munzvimbo dzemitambo Ndira 2019.